Isbedel ku yimid Kuraastii Aqalka Sare ee khilaafka ka dhaliyey Hirshabelle (Yaa ka haray Doorashada?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waaa isbedel ku yimid, xalna laga gaaray laba kursi oo ka harsanaa Aqalka Sare, lagana soo doorto Maamulka Hirshabeelle, kadib khilaaf hareeyay labadan kursi.
Kursigii tirsigiisu ahaa #UH 8 ayaa waxaa ka haray laba musharax oo ka mid ahaa musharixiinta, waxaana heshiis laga gaaray in Kursiga uu noqdo mid ah ku tartamaan haween oo kaliya.
Xubnaha doorashada Kursigan ka baxay waxaa ka mida Musharixiinta Maxamed Macalin Xasan Kulmiye iyo Abuukar Xasan Cali Maqaneey oo sagu kursigan loo saadaalinayey, waxaana hadda ku tartami doona oo isugu soo haray.
1. Naciimo ibraahim Yuusuf
2. Iyo Samsam Cabdullahi Axmed
Kursiga kale ee muranku ka dhashay oo ah ku tartamayeen musharixiin uu midkood taageero ka heysto Madaxweye ku xigeenka Hirshabeelle ayaa xal laga gaaray, waxaana ku tartami doona saddexdii musharax ee ulu dhibco horeeyay wareegii koowaad oo kala ah:
1. Cabduqaadir Xanafi Sheekh Bashir
Guddiga Doorashada Hirshabeelle ayaa shaaciyay inay maanta dhici doonto Doorashada labada kursi ee ka harsan Aqalka Sare, lagana soo doorto maamulka Hirshabeelle.
Previous articleSidee Maxamed Farmaajo loogu soo dhoweeyay Magaalada Addis Ababa? (Sawirro)
Next articleNinkii Sawir-Gacmeedyada ugu Gefay Nebi Muxamed NNKH oo si fool xun ugu bakhtiyey Shil Culus (Daawo)